प्रविधिमैत्री बन्दै त्रिवि : कीर्तिपुरमा फाइबर जडान हुँदै « GDP Nepal
प्रविधिमैत्री बन्दै त्रिवि : कीर्तिपुरमा फाइबर जडान हुँदै
Published On :2June, 2018 5:40 pm
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले विश्वविद्यालयलाई फ्रि वाइफाई जोन एवं प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यकासाथ नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा पहिलो चरणमा कीर्तिपुर परिसरमा फाइवर जडान एवं प्रविधि जडानको गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा भइरहेको गतिविधिका वारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र(सेडा)मा भएको एक कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधिकेन्द्रले कीर्तिपुर परिसरमा फाइवर जडानका काम अन्तिम चरणमा पुगेको, सवै निकायहरुको प्राविधिक नसाङ्कन तयार भएको जानकारी गरएको छ ।
पहिलो चरणमा कीर्तिमा अवस्थित केन्द्रीय विभागहरु, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायतका निकायहरुमा फाइवर जडान कार्य भइरहेको छ । कार्यक्रमा त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले नेपाल टेलिकम सँगको सहकार्यमा उपत्यका लगायत देशभरिका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसहरुलाई प्रविधिको माध्यामवाट योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनले त्रिविलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र विद्यार्थीलाई प्रविधिको माध्यामवाट सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गर्न गराउन प्रविधिमैत्री कक्षाकोण निर्माण गरिजानकारी गराए । त्रिविले यस प्रयोजनका लागी ९ करोड रुपैया छुट्याइसकेको थप नपुग रकमहरुपनि व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि केन्द्रलाई प्राविकि सहयोग गर्दै आइरहेको योमरी कम्पनीले पछिल्ला गतिविधि एवं योजना समेत समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । ६ महिना सम्म प्रविधि जडानका सम्पूर्ण कामहरु सक्नेगरी कम्पनीले काम गरिरकेको सूचना तथा प्रविधि केन्द्रका प्रमुख दिपक बहादुर शाहीले बताए ।
उनले केन्द्रीय २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनेगरी सरवर बनाउने, डाटावेस निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण निकायमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको जानकारी गराए ।
नयाँ वर्षमा टेलिकमको स्प्रिङ अफर, केके छन् सुविधा ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्याकेज
काठमाडौँ । आइएमई पे एपबाट नेपालमा उपलब्ध सबै क्यु आर स्क्यान गर्न मिल्ने भएको छ
टेलिकम सञ्चालकमा पौडेल निर्विरोध, अब्बल प्रतिफलको प्रतिवद्धता पूरा होला ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सञ्चालकमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । बिहीबारसम्ममा सर्वसाधारण